သမိုင်းတစ်​​လျှောက်​ အ​ကောင်းဆုံး သွင်းဂိုး နဲ့ ဘာ့​ကြောင့်​ ​ကော်​စတာနဲ့ ရင်​ဆိုင်​ဖို့ စိတ်​အားထက်​သန်​ ​နေသလဲ ဆိုတာ ​ပြောပြလိုက်​တဲ့ အီဒင်​ဟာဇက်​ - SPORTS MYANMAR
သမိုင်းတစ်​​လျှောက်​ အ​ကောင်းဆုံး သွင်းဂိုး နဲ့ ဘာ့​ကြောင့်​ ​ကော်​စတာနဲ့ ရင်​ဆိုင်​ဖို့ စိတ်​အားထက်​သန်​ ​နေသလဲ ဆိုတာ ​ပြောပြလိုက်​တဲ့ အီဒင်​ဟာဇက်​
အီဒင်​ဟာဇက်​ ဟာ သူ့ရဲ့ ကစားသမားဘဝ မှာ ရင်​သပ်​ရှု​မောဖွယ်​ရာ ဂိုး​တွေကို သွင်းယူ ခဲ့သူ ဖြစ်​​ပေမယ့်​လည်း လက်​ရှိ သူ့ရဲ့ ရီးရဲယ်​မက်​ဒရစ်​ မန်​​နေဂျာ ဖြစ်​သူ ဇနက်​ဒင်းဇိဒန်းဟာ သမိုင်းတစ်​​လျှောက်​ အ​ကောင်းဆုံး ဂိုးကို သွင်းယူ ခဲ့သူ ဖြစ်​တယ်​လို့ ချီးကျူး ဂုဏ်​ပြုလိုက်​ပါတယ်​။ ဇိဒန်းဟာ ရီးရဲယ်​မက်​ဒရစ်​ အသင်းကို မန်​​နေဂျာ တစ်​ဦး ​အ​နေနဲ့ ချန်​ပီယံလိဂ်​ဖလား ၃နှစ်​ ဆက်​တိုက်​ ရယူ ​ပေးခဲ့တဲ့ မန်​​နေဂျာ အဖြစ်​ မှတ်​တမ်း ဝင်​ထားခဲ့သလို ကစားသမား တစ်​ဦး အ​နေနဲ့လည်း လွန်​ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၂ ခုနှစ်​ ​လေ​ဗာကူဆင်​နဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ချန်​ပီယံလိဂ်​ ဖိုင်​နယ်​မှာ ခမ်းနား ကြီးကြယ်​လှတဲ့ ဘယ်​​ခြေ volley ကန်​ချက်​နဲ့ အတူ ဒီပြိုင်​ပွဲမှာ အမြဲတမ်း တသသ​ပြော​နေရမယ့်​ အမှတ်​အသား တစ်​ခု လုပ်​ပြခဲ့ပါတယ်​။
ရီးရဲယ်​မက်​ဒရစ်​ မန်​​နေဂျာ​ဟောင်း ဆိုလာရီဟာ ​ရှေ့မှာ ရှိ​နေတဲ့ ​ရော်​ဘတ်​တိုကားလို့စ်​ ဆီကို ခုတ်​တင်​​ပေးလိုက်​ပြီး ဘရာဇီး ဘယ်​​နောက်​ခံလူဟာ ဘယ်​​တောင်​ပံ က​နေ ပင်​နယ်​တီ ဧရိယာ အစပ်​မှာ ရှိ​နေတဲ့ ဇိဒန်းတီကို အမြင့်​​ဘော ချ​ပေးခဲ့ပါတယ်​။ ဇိဒန်းဟာ အဆိုပါ ​ဘောလုံးကို ​မြေမကျ ဘယ်​​ခြေ volley ကန်​ချက်​နဲ့ လှလှပပ ကန်​သွင်းယူကာ ဂလက်​စကိုမှာ လာကြည့်​ခဲ့တဲ့ ပရိတ်သတ်​​တွေကို အံ့သြမင်သက်​ ​စေခဲ့ပြီး ဒါဟာ ဒီပွဲမှာ ရီးရဲယ်​အတွက်​ အနိုင်​ဂိုး ဖြစ်​​စေ ခဲ့ပါတယ်​။ ဒီဂိုးဟာ ရီးရဲယ်​ ရဲ့ အမာခံ ပရိတ်​သတ်​ ဖြစ်​ခဲ့သူ ဟာဇက်​အတွက်​ က​တော့ အ​ကောင်းဆုံး ဂိုးပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​။
ဟာဇက်​က “သမိုင်းတစ်​​လျှောက်​ အ​ကောင်းဆုံး ဂိုးလား? ​ဘေယာ​လေ​ဗာကူဆင်​ နဲ့ပွဲက ဇိဒန်းရဲ့ volley ပါ။” လို့ ​ပြောခဲ့ပါတယ်​။
ဟာဇက်​ဟာ လွန်​ခဲ့တဲ့ ၁၇ နှစ်​က ဂလက်​စကို မှာ ပြင်​သစ်​ ကြယ်​ပွင့်​ကြီး လုပ်​ပြခဲ့တဲ့ အရာကို ဒီရာသီ ချန်​ပီယံလိဂ်​ မှာ လုပ်​ပြဖို့ အတွက်​ ​မျှော်​လင့်​ ​နေ​ပေမယ့်​ လက်​ရှိမှာ​တော့ ရီးရဲယ်​မက်​ဒရစ်​ နဲ့ ဟာဇက်​တို့ အထူး အာရုံစိုက်​ သွားရမှာ က​တော့ ဒီတစ်​ပတ်​ စ​နေ​နေ့ အက်​သလက်​တီကို မက်​ဒရစ်​ နဲ့ ရင်​ဆိုင်​ရမယ့်​ ဒါဘီပွဲစဉ်​ ဖြစ်​ပါတယ်​။ ရီးရဲယ်​မက်​ဒရစ်​ ဟာ လက်​ရှိ လာလီဂါ အမှတ်​​ပေးဇယားရဲ့ ပထမ​နေရာမှာ ရပ်​တည်​ ​ပေမယ့်​လည်း တတိယ​နေရာ က အက်​သလက်​တီကို နဲ့ ရမှတ်​ ၁ မှတ်​သာ ကွာ​ဟ​နေပြီး အမှတ်​​ပေးဖလား အတွက်​ အ​ရေးပါတဲ့ ပွဲဖြစ်​တာ​ကြောင့်​ ပြိုင်​ဆိုင်​မှု​တော့ ပြင်းထန်​​နေမှာ ဖြစ်​ပါတယ်​။
ဘယ်​ဂျီယံ စတားဟာ ပြိုင်​ဘက်​ အသင်းမှာ သူ့ရဲ့ ချဲလ်​ဆီး အသင်း​ဖော်​​ဟောင်း​တွေကို ပြန်​လည်​ ရင်​ဆိုင်​ သွားရမှာ ဖြစ်​ပြီး အထင်​ရှားဆုံး က​တော့ ဒီ​ယေဂို​ကော်​စတာ ဖြစ်​ပါတယ်​။ ​ကော်​စတာ ချဲလ်​ဆီး မှာ လာ​ရောက်​ ကစားခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်​တာ ကာလမှာ ၎င်းတို့ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလား ၂ကြိမ်​ အတူတကွ ရယူ နိုင်​ခဲ့ကြပါတယ်​။ ဟာဇက်​ကလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ ​နွေရာသီ မှာ ရီးရဲယ်​ကို ​ပြောင်းလာ ခဲ့တာ​ကြောင့်​ တစ်​ချိန်​က အသင်း​ဖော်​​တွေဟာ စ​နေ​နေ့မှာ ပြိုင်​ဘက်​ အဖြစ်​ ပထမဦးဆုံး ပြန်​လည်​ ရင်​ဆိုင်​ ရ​တော့မှာ ဖြစ်​ပါတယ်​။
ဟာဇက်​က “စပယ်​ရှယ်​ ပြိုင်​ဘက်​လား? ဒီ​ယေဂို​ကော်​စတာ ဟာ ကျွန်​​တော်​ အရမ်း ရင်​ဆိုင်​ ချင်​တဲ့ ပြိုင်​ဘက်​ပါ။ ဘာလို့်လဲဆို​တော့ သူဟာ ကျွန်​​တော့်​ သူငယ်​ချင်း ဖြစ်​ပြီး ကျွန်​​တော်​တို့ အတူတကွ ကစားခဲ့ဖူးပါတယ်​။” လို့ ဆိုသွားပါတယ်​။
ဟာဇက်​ဟာ ရီးရဲယ်​မက်​ဒရစ်​ ကစားသမား ဘဝ အစပိုင်းမှာ အခက်​အခဲ​တွေနဲ့ ရုန်းကန်​ ​နေခဲ့ရပြီး ဒီရာသီ အသင်းအတွက်​ ၃ ပွဲ ကစားထားပြီး ဖြစ်​​ပေမယ့်​ ဂိုးဖန်​တီးမှု​ကော သွင်းဂိုးပါ မရ​သေးပါဘူး။ ရီးရဲယ်​ ကလည်း ဒီရာသီ ချန်​ပီယံလိဂ်​ အဖွင့်​ပွဲစဉ်​မှာ ပီအက်​ဂျီ ကို ၃ဂိုးပြတ်​နဲ့ ရှုံးခဲ့တဲ့အပြင်​ အဲဒီပွဲ မတိုင်​မီအထိ လာလီဂါ မှာ ရလဒ်​​တွေ သိပ်​မ​ကောင်း ခဲ့​ပေမယ်​လည်း ​နောက်​​ဆုံး ၂ ပွဲဆက်​ နိုင်​ကာ လမ်း​ကြောင်းမှန်​​ပေါ် ပြန်​​ရောက်​လာခဲ့ပါတယ်​။
ဟာဇက်​က “ရီးရဲယ်​မက်​ဒရစ်​ အတွက်​ ကစားတဲ့ အခါ ပွဲတိုင်း အနိုင်​ရဖို့ လိုပါတယ်​။ ဒီလိုမျိုး ပုံစံပါ။ ဒါဟာ ကမ္ဘာ့အ​ကောင်းဆုံး ကလပ်​တစ်​ခု ဖြစ်​​နေတာ​ကြောင့်​ ဒီဖိအားဟာ အမြဲ ရှိ​နေပါတယ်​။ ဒါ​ပေမယ့်​ ကျွန်​​တော်​တို့မှာ အရည်​အ​သွေး မြင့်​မားတဲ့ အသင်းကို ပိုင်​ဆိုင်​ ထားပါတယ်​။ အမြဲတမ်း ကစားရ ခက်​ခဲတဲ့ ဆီ​ဗီလာ ရဲ့ ကွင်းမှာလည်း ကျွန်​​တော်​တို့ အနိုင်​ရခဲ့ပါတယ်​။
ချန်​ပီယံလိဂ်​မှာလည်း ဒီလိုပါပဲ။ အဖွင့်​ပွဲစဉ်​မှာ ပီအက်​ဂျီ ကို ရှုံးနိမ့်​ခဲ့​ပေမယ့်​ စစီဖလားကို ရယူဖို့ အ​ရေးပါ​နေဆဲပါ၊ ဒါ​ပေမယ့်​ ကျွန်​​တော့်​တို့ ပိုင်​ဆိုင်​ထားတဲ့ အသင်းရဲ့ အရည်​အ​သွေး အရ ဒါကို အိမ်​မက်​မက်​နိုင်​ပါတယ်​။” လို့ ​ပြောခဲ့ပါတယ်​။
သမိုငျးတဈ​​လြှောကျ​ အ​ကောငျးဆုံး သှငျးဂိုး နဲ့ ဘာ့​ကွောငျ့​ ​ကျော​စတာနဲ့ ရငျ​ဆိုငျ​ဖို့ စိတျ​အားထကျ​သနျ​ ​နသေလဲ ဆိုတာ ​ပွောပွလိုကျ​တဲ့ အီဒငျ​ဟာဇကျ​
အီဒငျ​ဟာဇကျ​ ဟာ သူ့ရဲ့ ကစားသမားဘဝ မှာ ရငျ​သပျ​ရှု​မောဖှယျ​ရာ ဂိုး​တှကေို သှငျးယူ ခဲ့သူ ဖွဈ​​ပမေယျ့​လညျး လကျ​ရှိ သူ့ရဲ့ ရီးရဲယျ​မကျ​ဒရဈ​ မနျ​​နဂြော ဖွဈ​သူ ဇနကျ​ဒငျးဇိဒနျးဟာ သမိုငျးတဈ​​လြှောကျ​ အ​ကောငျးဆုံး ဂိုးကို သှငျးယူ ခဲ့သူ ဖွဈ​တယျ​လို့ ခြီးကြူး ဂုဏျ​ပွုလိုကျ​ပါတယျ​။ ဇိဒနျးဟာ ရီးရဲယျ​မကျ​ဒရဈ​ အသငျးကို မနျ​​နဂြော တဈ​ဦး ​အ​နနေဲ့ ခနျြ​ပီယံလိဂျ​ဖလား ၃နှဈ​ ဆကျ​တိုကျ​ ရယူ ​ပေးခဲ့တဲ့ မနျ​​နဂြော အဖွဈ​ မှတျ​တမျး ဝငျ​ထားခဲ့သလို ကစားသမား တဈ​ဦး အ​နနေဲ့လညျး လှနျ​ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၂ ခုနှဈ​ ​လေ​ဗာကူဆငျ​နဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ခနျြ​ပီယံလိဂျ​ ဖိုငျ​နယျ​မှာ ခမျးနား ကွီးကွယျ​လှတဲ့ ဘယျ​​ခွေ volley ကနျ​ခကျြ​နဲ့ အတူ ဒီပွိုငျ​ပှဲမှာ အမွဲတမျး တသသ​ပွော​နရေမယျ့​ အမှတျ​အသား တဈ​ခု လုပျ​ပွခဲ့ပါတယျ​။
ရီးရဲယျ​မကျ​ဒရဈ​ မနျ​​နဂြော​ဟောငျး ဆိုလာရီဟာ ​ရှမှေ့ာ ရှိ​နတေဲ့ ​ရျော​ဘတျ​တိုကားလို့ဈ​ ဆီကို ခုတျ​တငျ​​ပေးလိုကျ​ပွီး ဘရာဇီး ဘယျ​​နောကျ​ခံလူဟာ ဘယျ​​တောငျ​ပံ က​နေ ပငျ​နယျ​တီ ဧရိယာ အစပျ​မှာ ရှိ​နတေဲ့ ဇိဒနျးတီကို အမွငျ့​​ဘော ခြ​ပေးခဲ့ပါတယျ​။ ဇိဒနျးဟာ အဆိုပါ ​ဘောလုံးကို ​မွမေကြ ဘယျ​​ခွေ volley ကနျ​ခကျြ​နဲ့ လှလှပပ ကနျ​သှငျးယူကာ ဂလကျ​စကိုမှာ လာကွညျ့​ခဲ့တဲ့ ပရိတျသတျ​​တှကေို အံ့သွမငျသကျ​ ​စခေဲ့ပွီး ဒါဟာ ဒီပှဲမှာ ရီးရဲယျ​အတှကျ​ အနိုငျ​ဂိုး ဖွဈ​​စေ ခဲ့ပါတယျ​။ ဒီဂိုးဟာ ရီးရဲယျ​ ရဲ့ အမာခံ ပရိတျ​သတျ​ ဖွဈ​ခဲ့သူ ဟာဇကျ​အတှကျ​ က​တော့ အ​ကောငျးဆုံး ဂိုးပဲ ဖွဈ​ပါတယျ​။
ဟာဇကျ​က “သမိုငျးတဈ​​လြှောကျ​ အ​ကောငျးဆုံး ဂိုးလား? ​ဘယော​လေ​ဗာကူဆငျ​ နဲ့ပှဲက ဇိဒနျးရဲ့ volley ပါ။” လို့ ​ပွောခဲ့ပါတယျ​။
ဟာဇကျ​ဟာ လှနျ​ခဲ့တဲ့ ၁၇ နှဈ​က ဂလကျ​စကို မှာ ပွငျ​သဈ​ ကွယျ​ပှငျ့​ကွီး လုပျ​ပွခဲ့တဲ့ အရာကို ဒီရာသီ ခနျြ​ပီယံလိဂျ​ မှာ လုပျ​ပွဖို့ အတှကျ​ ​မြှျော​လငျ့​ ​နေ​ပမေယျ့​ လကျ​ရှိမှာ​တော့ ရီးရဲယျ​မကျ​ဒရဈ​ နဲ့ ဟာဇကျ​တို့ အထူး အာရုံစိုကျ​ သှားရမှာ က​တော့ ဒီတဈ​ပတျ​ စ​နေ​နေ့ အကျ​သလကျ​တီကို မကျ​ဒရဈ​ နဲ့ ရငျ​ဆိုငျ​ရမယျ့​ ဒါဘီပှဲစဉျ​ ဖွဈ​ပါတယျ​။ ရီးရဲယျ​မကျ​ဒရဈ​ ဟာ လကျ​ရှိ လာလီဂါ အမှတျ​​ပေးဇယားရဲ့ ပထမ​နရောမှာ ရပျ​တညျ​ ​ပမေယျ့​လညျး တတိယ​နရော က အကျ​သလကျ​တီကို နဲ့ ရမှတျ​ ၁ မှတျ​သာ ကှာ​ဟ​နပွေီး အမှတျ​​ပေးဖလား အတှကျ​ အ​ရေးပါတဲ့ ပှဲဖွဈ​တာ​ကွောငျ့​ ပွိုငျ​ဆိုငျ​မှု​တော့ ပွငျးထနျ​​နမှော ဖွဈ​ပါတယျ​။
ဘယျ​ဂြီယံ စတားဟာ ပွိုငျ​ဘကျ​ အသငျးမှာ သူ့ရဲ့ ခြဲလျ​ဆီး အသငျး​ဖျော​​ဟောငျး​တှကေို ပွနျ​လညျ​ ရငျ​ဆိုငျ​ သှားရမှာ ဖွဈ​ပွီး အထငျ​ရှားဆုံး က​တော့ ဒီ​ယဂေို​ကျော​စတာ ဖွဈ​ပါတယျ​။ ​ကျော​စတာ ခြဲလျ​ဆီး မှာ လာ​ရောကျ​ ကစားခဲ့တဲ့ ၃ နှဈ​တာ ကာလမှာ ၎င်းငျးတို့ဟာ ပရီးမီးယားလိဂျ ဖလား ၂ကွိမျ​ အတူတကှ ရယူ နိုငျ​ခဲ့ကွပါတယျ​။ ဟာဇကျ​ကလညျး ပွီးခဲ့တဲ့ ​နှရောသီ မှာ ရီးရဲယျ​ကို ​ပွောငျးလာ ခဲ့တာ​ကွောငျ့​ တဈ​ခြိနျ​က အသငျး​ဖျော​​တှဟော စ​နေ​နမှေ့ာ ပွိုငျ​ဘကျ​ အဖွဈ​ ပထမဦးဆုံး ပွနျ​လညျ​ ရငျ​ဆိုငျ​ ရ​တော့မှာ ဖွဈ​ပါတယျ​။
ဟာဇကျ​က “စပယျ​ရှယျ​ ပွိုငျ​ဘကျ​လား? ဒီ​ယဂေို​ကျော​စတာ ဟာ ကြှနျ​​တျော​ အရမျး ရငျ​ဆိုငျ​ ခငျြ​တဲ့ ပွိုငျ​ဘကျ​ပါ။ ဘာလိျု့လဲဆို​တော့ သူဟာ ကြှနျ​​တျော့​ သူငယျ​ခငျြး ဖွဈ​ပွီး ကြှနျ​​တျော​တို့ အတူတကှ ကစားခဲ့ဖူးပါတယျ​။” လို့ ဆိုသှားပါတယျ​။
ဟာဇကျ​ဟာ ရီးရဲယျ​မကျ​ဒရဈ​ ကစားသမား ဘဝ အစပိုငျးမှာ အခကျ​အခဲ​တှနေဲ့ ရုနျးကနျ​ ​နခေဲ့ရပွီး ဒီရာသီ အသငျးအတှကျ​ ၃ ပှဲ ကစားထားပွီး ဖွဈ​​ပမေယျ့​ ဂိုးဖနျ​တီးမှု​ကော သှငျးဂိုးပါ မရ​သေးပါဘူး။ ရီးရဲယျ​ ကလညျး ဒီရာသီ ခနျြ​ပီယံလိဂျ​ အဖှငျ့​ပှဲစဉျ​မှာ ပီအကျ​ဂြီ ကို ၃ဂိုးပွတျ​နဲ့ ရှုံးခဲ့တဲ့အပွငျ​ အဲဒီပှဲ မတိုငျ​မီအထိ လာလီဂါ မှာ ရလဒျ​​တှေ သိပျ​မ​ကောငျး ခဲ့​ပမေယျ​လညျး ​နောကျ​​ဆုံး ၂ ပှဲဆကျ​ နိုငျ​ကာ လမျး​ကွောငျးမှနျ​​ပျေါ ပွနျ​​ရောကျ​လာခဲ့ပါတယျ​။
ဟာဇကျ​က “ရီးရဲယျ​မကျ​ဒရဈ​ အတှကျ​ ကစားတဲ့ အခါ ပှဲတိုငျး အနိုငျ​ရဖို့ လိုပါတယျ​။ ဒီလိုမြိုး ပုံစံပါ။ ဒါဟာ ကမ်ဘာ့အ​ကောငျးဆုံး ကလပျ​တဈ​ခု ဖွဈ​​နတော​ကွောငျ့​ ဒီဖိအားဟာ အမွဲ ရှိ​နပေါတယျ​။ ဒါ​ပမေယျ့​ ကြှနျ​​တျော​တို့မှာ အရညျ​အ​သှေး မွငျ့​မားတဲ့ အသငျးကို ပိုငျ​ဆိုငျ​ ထားပါတယျ​။ အမွဲတမျး ကစားရ ခကျ​ခဲတဲ့ ဆီ​ဗီလာ ရဲ့ ကှငျးမှာလညျး ကြှနျ​​တျော​တို့ အနိုငျ​ရခဲ့ပါတယျ​။
ခနျြ​ပီယံလိဂျ​မှာလညျး ဒီလိုပါပဲ။ အဖှငျ့​ပှဲစဉျ​မှာ ပီအကျ​ဂြီ ကို ရှုံးနိမျ့​ခဲ့​ပမေယျ့​ စစီဖလားကို ရယူဖို့ အ​ရေးပါ​နဆေဲပါ၊ ဒါ​ပမေယျ့​ ကြှနျ​​တျော့​တို့ ပိုငျ​ဆိုငျ​ထားတဲ့ အသငျးရဲ့ အရညျ​အ​သှေး အရ ဒါကို အိမျ​မကျ​မကျ​နိုငျ​ပါတယျ​။” လို့ ​ပွောခဲ့ပါတယျ​။